हेर्नुहोस ५० लाख खर्चिएको सार्वजनिक शौचालयको हालत ! न हेल्मेट न परमीट भारतीय प्रहरीको सान – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 330 SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE […]
Published by Machhapuchhre FM at 2019-01-19
अर्काको गाइ चोरि काटेर भोज लगाउने पक्राउ,नक्कली नागरिकता बनाउने ठाउँमा हाम्रो स्टिङ अपरेसन – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 329 SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV […]
Published by Machhapuchhre FM at 2019-01-15
अवैध क्रसरमा वडा अध्यक्षकै टिपर, लुम्बिनीमा भारतको ठेगाना भएको बोर्ड ५ मिनेट हट्यो – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 327 SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV […]
१० बर्षकी आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने बावु जेलमा । राजदुत लक्की शेर्पावारे थप खुलासा – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 324 SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel WEBSITE : […]